Maitiro Ekusarudza Shopify Zvirongwa zveYako Kudonhedza Chitoro? - Kudonhedza kubva pasirese kusvika pasirese
Nezve Kudonhedza Academy sei Isa APPS Vhura Zvitoro
Maitiro Ekusarudza Shopify Zvirongwa zveYako Dropshipping Chitoro?
Shopify ndeimwe yemapuratifomu akanakisa ekutanga chitoro chinodonhedza. Unogona kugashira mukana wezvakanaka dhizaini maturu, anopfuura 2000 maapplication ane akawanda ekudonhedza maapplication, uye ekubhadhara ekugadzirisa marongero ayo anokubatsira iwe kuchengetedza ako maitikisheni uye kukurumidza kuita Checkout maitiro kubva pairi. Uchishandisa maapplication anoita kuti mashandiro ako anyatsoita inzira yekugadzirisa mutengo wezvigadzirwa pamwe nekutengesa kuri kukura. Zvishandiso izvi zvinokwanisa zvakare kukuchengetedza nguva nemari nekusunungura maawa asingaverengeke uye zvinokutendera kuti utarise kuchitoro chako chepamhepo. Chinyorwa chino chichaunza maitiro ekusarudza Shopify maapplication echitoro chako chinodonhedza uye gumi nematanhatu maapplication anovhara kushambadzira kwako, dhizaini dhizaini, nezvimwe.
Nzira Yokusarudza Sei?
Pane matanho mashanu okusarudza Shopify maapplication:
Unogona kusefa mapurogiramu aripo nechikamu chinofukidza kushambadza, kutengesa, kutumira, nezvimwe, uye kuunganidza kunosanganisira kuvhura shopu yako, kukura bhizinesi rako, kutarisira POS, nezvimwe, uye zvakare nemutengo, zvinoenderana nechinangwa chako uye kudiwa kwechinhu. Saka iwe une runyorwa rwemaapplication kuenzanisa uye kusarudza.
Tarisa Review Scores
Izvo zvinobatsira kusefa iyo Shopify maapplication nemaonero avo ekuongorora. Tarisa maapplication ane hombe vhoriyamu yezvikamu zvepamusoro pane yakaenzana urefu hwenguva. Ose ari maviri huwandu uye huwandu hwakakosha nekuda kwekuti maapplication ane mashoma mashoma ekukwirisa akakwenenzvera ongororo anogona kutadza kunyatso kuratidza iwo maapplication 'kugona. Usatenge chirongwa chinodhura chine akati wandei wongororo dzinogona kusiiwa neshamwari dzemugadziri nemhuri.
3.Request For ALive DEmo
Mazhinji maapplication anozivikanwa anopa chinongedzo chekukumbira demo mhenyu kwaunogona kutarisa mashandisiro anoita iyo app mune chaiyo-nguva. Kana iri yekumberi-kumagumo app, izvi zvichakubatsira iwe zvirinani kufungidzira kuti iyo app ichaita senge pachitoro chako. Uye zvikasadaro ndeye yekumashure-kumagumo app, izvi zvinokubatsira iwe kuti iyo app inomhanyisa sei uye kugadzirisa ako maitiro.
4.Research The Support
Zvirongwa zvakasiyana zvinopa nhanho dzakasiyana dzekutsigirwa, kubva munharaunda inobatsira kuemail kana rutsigiro rwefoni, izvo zvicharatidza pasi pechikamu che "rutsigiro". Iwe unofanirwa kutsvagisa danho rerutsigiro rwewako runyorwa maapplication kuti uwane maapplication anopa rubatsiro rwakanaka. Ipfungwa yakanaka kureva wongororo kuti uone kana rutsigiro rwunopihwa rwuchiwanika, panguva yakakodzera uye rwakavimbika kana kuti kwete pamwe nekuti rutsigiro runowanikwa sei kune chero kupihwa kupihwa kweapp.
5. Tarisa Yekupedzisira Yakagadziridzwa Nguva
Zvichangoburwa zvitsva zvinoratidza kuti Anwendung iri kushanda kuwedzera mamwe maficha nekuvandudza ruzivo rwako. Usasarudze chirongwa chisina kuvandudza maficha acho.
1.CJdropshipping-Yakanyanya Kudonhedza mupi
CJdropshipping iri yemahara Anwendung kuti otomatiki kuzadzisa mirairo yako. Iwe unongopa mvumo yako Shopify chitoro ku CJdropshipping, tenga zvigadzirwa kuchitoro chako, ipapo CJdropshipping ichaidhonza uye izadzise mirairo yako otomatiki. Uye zvakare, CJ zvakare inopa masevhisi sekutsvagisa, foto & vhidhiyo kupfura, yemuno yekuchengetera, kuongorora kwehunhu, uye zvimwe. Iyi ndeye-yekumira sevhisi yebasa rako rekudonha bhizinesi.
2.Kutakura Mahara Bhawa naHxtom
Yemahara yekutumira bhaa inokutendera iwe kuti utaridze yemahara yekutumira kupihwa mune akasiyana webhusaiti mapeji ayo anonyatso kugadzirisa. Uye inoratidza mameseji anofambira mberi apo vatengi vanoisa zvimwe zvinhu muzvitoro zvavo zvekutengesa. Hapana mubvunzo kuti zvinoita kuti vatengi vaone zvinyorwa zvekutakura zviri nyore kuti zvibatsire kurerutsa mukutenga. Nekuti zviri pachena uye zvinoonekwa, zvinobvumira vataridzi kuti vawane mukana wekutumira ruzivo vasina kuenda kuburikidza nekutarisa maitiro. Izvo zvakare zvinogona kubatsira kudzikisa ngoro dzakasiiwa.
Ads naVarinode ndeye yemahara Ad kuchinjana inoitirwa yakanangana yakananga kune eCommerce yakamira. Inobatsira kugovana traffic nezvimwe zvitoro, uye kusvika kune vatengi vatsva vanofarira zvigadzirwa zvako. Neichi chine simba uye chinoshanda chekutengesa chiteshi, unogona kuwana nyowani yakanangwa traffic, uye wedzera kutengesa kwechitoro chako. Uye iyo app ndeye mahara zvachose uye inogona kuchengetedza yako kushambadzira kushandisa.
4.Loox - Mifananidzo Ongororo
Loox inokutendera iwe kuti utore iwo mapikicha ongororo aunogona kuitisa pane chero peji rezvitoro zvako, senge pazasi pechigadzirwa chiri kuratidzwa mumifananidzo, kana kunyangwe yakatsaurwa yekudzokorora peji. Iwe unogona kutumira otomatiki maemail kuti ubvunze vatengi vako kuti vaongorore. Mukudzorera iwo wongororo, ipa zvidzoreso chero nguva iyo mifananidzo inotumirwa. Sekureva kwaLoox, zvigadzirwa zvaisanganisira kuongororwa kwemifananidzo zvakawedzera shanduko kusvika pa91%.
5.Shogun Themes uye Akavaka Peji
Shogun inogona kugadzirisa mapeji ekumhara, peji rekutanga, zvigadzirwa zvemapeji, mapeji ebloggi, ndatenda peji, mapeji ekuunganidza, anotsvedza, matabhu, uye mavhidhiyo kumashure. Uye theme mupepeti inogonesa zvikamu chero papi pese pakazara kutonga kweiyo peji dhizaini Iwe unogona zvakare kuwana yakajairwa peji kuita analytics uye AB kuyedza kweanotengesa mafunnel, wedzera kungoro, kuverenga pasi, kukwidza kumusoro & nezvimwe. Inovimbwa nezvitoro zvinopfuura gumi zveKK kusanganisira mabhureki epamusoro paShopify seK-Swiss, Leesa Mattresses, Chubbies Shorts uye MVMT Watches.
6.Judge.me Chigadzirwa Ongororo
Judge.me inobatsira iwe kuunganidza uye kuratidza wongororo nezve zvigadzirwa zvako uye Shopify chitoro. Izvi zvinowedzera chiyero chako chekushandurwa, organic traffic, uye mutengi kusangana nekushandisa yako yemushandisi-inogadzirwa zvemukati. Iyo ine risingaperi risingaperi-yemahara chirongwa isina muganho pane maodha kana zvikumbiro uku ichipawo yakabhadharwa maficha senge mafoto ongororo, facebook yemagariro kusundira, nezvimwe.
7.BEST Mari Inoshandura
Iyo Anwendung inogona kushandura iwo mutengo otomatiki zvichienderana nenzvimbo yevatengi vako iyo inogadzira inonakidza uye yakapusa yekutenga ruzivo kune ako vatengi. Unogona kuita kuti imhanye chete kumashure. Vatengi vako vacharamba vachiona mitengo yakashandurwa vasina kuona iyo inoshandura mari. Pane matatu akasiyana emari shanduko yemari kuti iwe usarudze kuve neyakanaka dhizaini.
8.AfterShip - Tevera & Zivisa
AfterShip chirongwa chekutumira chinokutendera kuti utarise zvese zvaunotumira munzvimbo imwechete uye ugadzire peji rekutevera kune imwe neimwe yekutumirwa iyo inogona kugadziriswa gare gare nekusanganisira yako sitoro URL, brand logo, uye kunyange Instagram mifananidzo. Nekudaro vatengi vako vanozove neruzivo rwese rwavanoda nezvekuendesa kwako.
9.Kunyemwerera: Makomborero & Kuvimbika
Kunyemwerera kunopa matatu mibairo chirongwa, kusanganisira kuvimbika poindi chirongwa, chirongwa chekutumira, chirongwa cheVIP chine zvese zvemahara uye zvakabhadharwa maficha. Inokupa iri nyore nzira yekukurudzira hunhu hunovaka hukama hwepamoyo uye kuvimbika kwevatengi. Zvakare, kunyemwerera kunoita kuti iwe uburitse mibairo poindi inoenderana nekugadzira maakaundi, kugovana zvigadzirwa pasocial media, uchitevera chako brand, zvichingodaro.
Kuzvimba Kuvimbika & Mibairo
10.Omnendend Email Kushambadzira & SMS
Omnisend Email Kushambadzira & SMS inogona kubata ako ese ekushambadzira zviitiko pane dzakawanda chiteshi mune imwechete chikuva, kwete kungo email kushambadzira. Inobatanidza yako e-commerce bhizinesi pamwe neanogona uye aripo vatengi kune akawanda nzira: email, SMS, Facebook, Google, uye nevamwe. Uine simba, rinogadziriswa dhata uye kuita kwako pachako, unogona kusvika kune vamwe vatengi munzira dzakangwara pane mamwe magero uye kutengesa zvimwe.
Plug muSEO inobatsira iwe kuwana, kugadzirisa matambudziko, uye kugadzirisa search engine optimization (SEO) nyaya kuitira kuti iwe ugone kuwana yakawanda yewebhu traffic kuchitoro chako chepamhepo. Inopa zvemahara maficha senge risingaperi SEO, Blog, Speed ​​matambudziko anotarisa, inogadzirisa mirayiridzo & kodhi, otomatiki email kunyevera, uye email rubatsiro & rutsigiro. Kana iwe uchida mamwe maficha senge yakarongeka dhata, ine simba SEO kudzora, iwe unofanirwa kubhadhara kune $ 20 pamwedzi.
Kuti utaure kune rumwe ruzivo nezve maapps ari pamusoro, ndapota pinda mu Shopify App Chitoro uye uongorore.
Uye kana iwe uchingoda kureva kune akanakisa emahara Shopify maapplication, ndapota pinda mukati, blog pane Shopify hofisi webhusaiti kuunza akanakisa 25 emahara Shopify maapplication.
2 maawa apfuura
Ndiri mutsva mu cjdropshipping ndichiedza nekufamba nezvayo. Ndine matambudziko ekunyora chigadzirwa changu chekutanga pa ebay.
Ndekupi kwandinowana rumwe ruzivo urwu kuti ndizadze ma blanks? help please. ... Ona ZvimweOna Zvishoma
21 maawa apfuura
Chii chinonzi cjdropshipping? ... Ona ZvimweOna Zvishoma
Tags zvakanakisa shopu maapplication, zvakanakisa shopify maapplication 2021, cj kudonhedza, cjdropship, cjdropshipping, dropshipping, kudonhedza maapplication, kutanga sei kudonhedza bhizinesi, kutanga sei kudonhedza, kuita mari paIndaneti, shopu maapplication, shopu kudonhedza, pamusoro shopu maapplication
← Ungatanga Sei Kudonhedza Bhizinesi muPhilippines → Iwo mashanu Akanakisa Shopify Mapurogiramu e5 Kuti Uwedzere Kutengesa Kwako